» तपाईंको समाचार
काठमाडौं । संसारका दुईसय बढी मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स् भित्राइ नेपालभर सेवा प्रदान गरिरहेको इसेवा मनी ट्रान्सफर र विदेशी मुद्रा एक्सचेन्ज तथा विश्वव्यापी मनी ट्रान्सफरको काम गर्दै आएको यु.ए.ई स्थित लुलु इन्टरनेस्नल एक्सचेन्जवीच रेमिट्यान्स् भुक्तानी सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता सँगै, यु.ए.ईका प्रमुख स्थान अबुधाबी, दुबई र सारजाह लगायत...
काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालका चिकित्सकले बिनाशल्यक्रिया आमाशयमा अड्किएको चम्चा निकालेका छन् । नर्भिक अस्पतालका पाचन रोग विशेषज्ञ तथा पाचन रोग केन्द्रका प्रमुख डा. सन्दीपराज कुँवर नेतृत्वको टिमले बिना शल्यक्रिया इण्डोस्कोपी गरी आमाशयमा गएर अड्किएको चम्चा निकालेको हो । काठमाडौंकै एक १७ वर्षीया किशोरीले झुक्किएर निलेको चम्चालाई बिनाशल्यक्रिया र...
२ सय ५५ मिटर अग्लो भिरमा खाजा खाँदै फर्स्ट लेडी आरजु राणा यसरी रमाइन् (१० तस्बिर)
कुश्मा । प्रधानमन्त्री सेर बहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा बाग्लुङ बलेवामा रहेको द क्लिफ प्रालिको रिसोर्ट परिसरमा निर्मित स्काइ क्याफेमा बसेर चियापान गरेकी छन् । कालीगण्डकी नदि खोँचमा नदि देखि २ सय ५५ मिटर अग्लो भिरमा स्टिलको डोरिमा झुन्ड्याएर निर्माण गरिएको स्काइ क्याफेमा देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन जोशी...
पुरुषमा पनि हुनसक्छ स्तन क्यान्सर, यी लक्षण देखिए तुरुन्तै अस्पताल जानुस्
काठमाडौं । पछिल्लो समय महिलाहरुमा स्तन क्यान्सरको समस्या बढ्दो छ । विशेष गरी ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरुमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । तर, धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, महिलामा मात्र होइन, पुरुषमा पनि स्तन क्यान्सर हुनसक्छ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा कार्यरत ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा.बानिरा कार्कीले पछिल्लो समय...
प्रभु बैंकमा तपाईंको खाता छ ? द क्लिफमा बन्जी गर्दा पाउनुस् यस्तो छुट
कुश्मा । नेपालकै उत्कृष्ट एड्भेन्चर हब द क्लिफ प्रालिले आफ्ना ग्राहकलाई सहुलियत दिन प्रभु बैंकसंग साझेदारी गरेको छ । साझेदारीसंगै प्रभु बैंकका कर्मचारी र प्रभु बैंकका ग्राहकले द क्लिफमा बन्जी, स्विङ, स्काइ साइक्लिङ लगायत एड्भेन्चर गतिविधि गर्दा दस प्रतिशत नगद छुट प्राप्त गर्नेछन् । प्रभु बैंकको मोबाइल एप, डेबिट...
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दशौं हजार श्रमिकले पाए डेढ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म योगदानकर्तालाई झण्डै डेढ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । कोषले यही असार २ गतेसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शीर्षकमा रु एक अर्ब ४३ करोड ५३ लाख भुक्तानी गरेको हो । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत १० हजार ५९६ योगदानकर्तालाई रु...
काठमाडौं । मिडियाहवको प्रस्तुति हास्य रियालिटी कार्यक्रम “कमेडी हव” को सह – प्रायोजन डिशहोम फाईवरनेटले गर्ने भएको छ । एपिवान टेलिभिजनमा बुधवार साँझ ८ बजे प्रशारण हुने “कमेडी हव” माग्नेबुढा (केदार घिमिरे) ले निर्देशन गरेका छन । राजाराजेन्द्र, हिमेश पन्त, जानुका केसी, नारिया गिरी लगाएत हास्य विधामा स्थान बनाउन...
काठमाडौं । आगामी दिनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने र मेहेनती हातहरुलाई अझ मेहेनती बन्नका लागि उर्जा प्रदान गर्दै केही समय भएपनि रमाइलो बनाउने उद्देश्यका साथ भर्खरै +२ दिई बसेका छात्रछात्राहरुलाई अन्नपूर्ण केबुलकारले केबुलकार टिकटमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ । यस छुट लिनको लागि...
हाइफ्युचरद्वारा रक्तदान शिविर आयोजना, सुनिता डंगोलले यसो भनिन्
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न ब्राण्डका उच्चस्तरिय ग्याजेट तथा डिभाइसहरु आयात तथा बितरण गर्दै आएको चर्चित कम्पनी हाइफ्युचर नेपाल (टेकस्टुडियो) ले रक्तदान शिविर आयोजना गरेको छ । कम्पनीले गंगादेवी चुचोल टोल सुन्दर समिति र रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा शिविर आयोजना गरेको हो । शिविरको उद्घाटन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले...
फोनपेको प्रमुख टेक्नोलोजी अफिसरमा सुवास थापा नियुक्त
काठमाडौं । नेपालको आग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेडको प्रमुख टेक्नालोजी अफिसरमा सुवास थापा नियुक्त भएका छन् । थापालाई मंगलबार फोनपेको सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको हो । वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) उद्योगको क्षेत्रमा ९ वर्ष भन्दा बढी सेवा अनुभव सम्हालेका थापाले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडमा ‘हेड–प्रोडक्ट र सिस्टम...